Maxaa ku dhacay Exchange Binance iyo markii dalab ka bilaabaan - Blockchain News
Maxaa ku dhacay Exchange Binance iyo markii dalab ka bilaabaan
Inkastoo ballamada, Binance ma uu tegin online subaxdii. In ka badan maalin ka hor, shaqo farsamo bilaabay on sarrifka saamiyada, taas waa in horseedi oo kaliya in a “hoos u dhac ku meel gaar ah ee wax soo saarka,” laakiin uu ugu danbeyn joojin shaqo ee is-dhaafsiga iyo jiiday on mudo aan cayinayn. Yesterday, Binance CEO Changpeng Jao ​​qoray on Twitter in ay jirto dhib ah lama filaanka ah ee kaga dayanayaan xogta, iyo waxay u baahan tahay dib-u-.Wadashaqayntaas of database, taas oo qaadan doona dhowr saacadood.
at 8.00 ee Berlin, Jao mar kale uga hadashay xaaladda, isagoo sheegay in ku dhiirigelinayaan in uu isku dayayaan saddex hab oo .Wadashaqayntaas, kala duwan ee xawaaraha: 1-2 saacadood, 5 saacadood oo 9 saacadood siday u kala horreeyaan. Halkaa marka ay marayso waxaa cad in hababka degdeg ah ma shaqeeyaan. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambaysay, ah “ansaxinta xog final” waxa ay hadda ka dhacaya, Dib ee ganacsiga ayaa la filayaa at 15.00 on Berlin. saac gudahood ka hor lagu kala gato saamiyada ee waa online, dadka isticmaala ay awoodaan in ay baajiso amar noqon doonaa. Intaa waxaa dheer, kooxda ku dhawaaqday in sida calaamo u soo dhoweeyey “taageero sii”, sarrifka wuxuu ka yareyn doonaa guddiga si uu 0.03% halkii marba ilaa February 24.
In kasta oo xaqiiqda ah in Changpeng Jao ​​ayaa celcelis ah u sheegtay in Exchange waa offline kaliya sababtoo ah shaqo farsamo, oo beeniyay weerarkii Hackers ah, dadka isticmaala qaar ka mid ah ayaa weli u maleynayaa in hack ah. Khaas ahaan, comments ka dhaafsiga ayaa dalbaday by John McAfee, isagoo sheegay in “Shirkadda lahayn ayaa qirtay inuu weerar Hackers ilaa lagu qasbay.” Xalay, McAfee ku qoray Twitter in uu “ma isku dayaan in ay ku beeran FUD,” laakiin uu ka helo daraasiin farriimo macluumaad ku saabsan jabsiga sarrifka saamiyada. Si aad boostada ku lifaaqan shaashada, oo hoostiisa, hoos logo Binance ah, dhaafsiga lagu eedeeyay laftiisa ayaa qirtay in la weeraray. Oo in kastoo qof taageeray Makafi, badan oo ku eedeeyay khabiir crypto macluumaadka aqlka iyo caddaynta shaki ah: “Sawirka soo diray qaar ka mid ah” jaalaha ah “koox – si aad u cadeeyo xaqiiqada?”, “Marna maqlay photoshop? qaan, “” aad tahay khabiir dhinaca ammaanka ah. ”
Makafi shaaca ka qaaday inuu “kaliya weydiiyo su'aal” iyo sida khabiir dhinaca ammaanka ah wuxuu og yahay in “haddii weerarka ma dhici waana la isku dayo inuu ku soo laabto lacag aan si dhakhso ah loo qaaday, fursadaha iyaga soo kabsaday hoos eber gudahood 24 saacadood.” Si kastaba ha ahaatee, CEO Binance, kuwaas oo u jawaabay tweets badan, ayaa sheegay in barnaamijyada weli “qaybisay FUD”, oo xaqiijiyay: “Waannu caddayn doonaa in aad tahay qaldo.” Isagoo ka jawaabaya eedeeymaha, Binance posted tweet leh bitcoins Sucuudiga iyo cinwaanada Ethereum:
Aan isku dayaya in ay faafin FUD, laakiin waxaan ka helay daraasiin warar sidan oo kale mid ka mid ah. Waxaan kaliya isku dayaya in ay fahmaan. Sida cilmi-ammaanka, Waan ogahay in hacks iman kara ka sii sahlan si ay u xalliyaan haddii si degdeg ah baaritaan yihiin. Maalmo ka dib weynaynaysaa hawsha by amarada manitude. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
Maxaa ku dhacay Exchange Binance ah?
weerar hubeysan ayaa waxaa ka go'an on Crypto Canadian ah Exchange
weerar hubeysan oo ka on t ...
Fariin Line Rafaa ...
Post Previous:sarrifka crypto Canadian Coinsquare kicisaa $ 30M
Post Next:Coincheck dhawaaqay celinta bilaabaan isbuuca soo socda